Praiminisitra Ntsay Christian: “Ady iraisana ny kolikoly…” | NewsMada
Praiminisitra Ntsay Christian: “Ady iraisana ny kolikoly…”
“Tsy anjaran’ny Birao mahaleo tena iadiana amin’ny kolikoly (Bianco) irery ny ady amin’ny kolikoly fa anjaranao, anjarako, anjarantsika rehetra amin’izay ambaratongam-pitondrana rehetra misy eto amin’ny tany sy ny fanjakana.”
Izay ny nambaran’ny Praiminisitra Ntsay Christian tamin’ny fihaonany tamin’ireo tomponandraiki-panjakana any Ranomafana, faritra Vatovavy Fitovinany, ny amin’ny famerenana ny hasin’ny fahefam-panjakana amin’izao fotoana izao.
“Tsotra ny fanontaniana: iza amintsika olom-pirenena no sahy hijoro, manana fahasahiana amin’izany tolona hametrahana fahamarinana sy fahitsiana izany?”, hoy izy. Koa amin’izany, ho sahy hijoro mba hanakiana amin’ny andavanandro ny asantsika sy ny fiainantsika amin’izany kolikoly izany.
Iza amintsika tomponandraikitra na aiza na aiza ny ambaratongam-pitondrana misy azy mba tsy hiverina ary tsy manaiky izany kolikoly izany, izay tena mambotry ny firenena amin’izao fotoana izao?